သံမဏိအပေါက်အပေါက်များထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်သံမဏိအပေါက်စက်ရုံ
En124 D400 သံသိုက်တွင်းအဖုံး
အခြေခံအချက်အလက်များ Model No .: Mingda-0002 အမျိုးအစား: ရွှံ့ခြောက်သဲသွပ်သွပ်နည်း - လမ်းညွှန်ပုံသွင်းခြင်းသဲအမာခံအမျိုးအစား - ဗဓေလသစ်သန္ဓေသားပစ္စည်း - သံမျက်နှာပြင်ကုသမှု - သဲမြေပြင်မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း - Ra1.6 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - SGS, ISO 9001: 2008 နောက်ထပ်အချက်အလက်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ ကုန်းတွင်း၊ လေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်။ မြောင်းအဖုံးများကိုသံသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီအဖုံးများသည်မိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မှသာယာဉ်များသည်သူတို့မောင်းနှင်သောအခါ၎င်းတို့သည်နေရာပြောင်း။ မရကြပါ။
ကြွေပြားနှင့်အတူ Ductile သံ manhole အဖုံး
အခြေခံအချက်အလက်များ Model No .: Mingda-0004 အမျိုးအစား: ရွှံ့ခြောက်သဲသွပ်သွပ်ပုံစံ: လမ်းညွှန်ပုံဆောင်ခဲသဲအမာခံအမျိုးအစား - အစေးသဲအမာခံပစ္စည်း - သံမျက်နှာပြင်ကုသမှု - သဲပေါက်ကွဲမှုမျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း - Ra0.2 စံ - AISI အသိအမှတ်ပြုချက် - SGS, CE, ISO ၉၀၀၁: ၂၀၀၈ ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များထုပ်ပိုးခြင်း - စံတင်ပို့သည့်အထုပ်အပိုးထုတ်လုပ်မှု - တန် ၁၀၀ တန် - လစဉ်အမှတ်တံဆိပ် - မင်ဒါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊
အခြေခံအချက်အလက်များ Model No .: Mingda-0004 အမျိုးအစား: ရွှံ့စေးသဲသဲသဲအမာခံအမျိုးအစား - ဗဓေလန္နသန္ဓေသားပစ္စည်း - သံမျက်နှာပြင်ကုသမှု - သဲပေါက်ကွဲမှုမျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း - Ra1.6 အဆင့် - AISI အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - SGS, ISO 9001: 2008 နောက်ထပ်အချက်အလက်များထုပ်ပိုးမှု - ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု - တန် ၁၀၀ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် - Mingda သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ မြေ၊ လေ၊ မူရင်းနေရာ - တရုတ်ထောက်ပံ့နိုင်မှု - ၁၀၀pcs / day လက်မှတ်: ISO9001 Port: T ...
EN124 D400 သံမဏိအပေါက်
အခြေခံအချက်အလက်များအမျိုးအစား - ရွှံ့စေးသွပ်သွပ်သတ္တုသွပ်နည်း: လမ်းညွှန်ပုံဆောင်ခဲသဲသဏ္Coreာန်အမျိုးအစား - အစေးသဲအမာခံပစ္စည်း - သံမျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း - Ra1.6 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - SGS, ISO 9001: 2008 အရွယ်အစား - ၈၅၀ * ၈၅၀ * ၈၀ မီလီမီတာအပိုဆောင်းအချက်အလက်များထုပ်ပိုး - စံတင်ပို့သည့်အထုပ် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား - ၂၀ တန် / လကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Mingda သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ မြေ၊ လေ၊ မူရင်းနေရာ - တရုတ်လက်မှတ် - ISO9001 ဆိပ်ကမ်း: Tianjin ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် Hebei Mi ...
ပြွန်သံ manhole အဖုံးနှင့် Frame
အခြေခံအချက်အလက်: ရွှံ့စေးသဲသွပ်သွပ်နည်း: လမ်းညွှန်ပုံသွင်းသဲသဏ္Coreာန်အမျိုးအစား - အစေးသဲအမာခံပစ္စည်း - သံမျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း - Ra1.6 အသိအမှတ်ပြုခြင်း - SGS, ISO 9001: 2008 အရွယ်အစား - ၈၅၀ * ၈၅၀ * ၈၀ မီလီမီတာအပိုဆောင်းအချက်အလက်များထုပ်ပိုးခြင်း - စံတင်ပို့သည့်အထုပ် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား - ၂၀ တန် / လကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Mingda သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ မြေ၊ လေ၊ မူရင်းနေရာ - တရုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - ISO9001 ဆိပ်ကမ်း: Tianjin ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Ductile ...
ရဆေိုးများအတွက် Ductile သံ manhole အဖုံး
အခြေခံအချက်အလက်: ရွှံ့စေးသွပ်သွန်းခြင်းနည်းလမ်း: လမ်းညွှန်ပုံဆောင်ခဲသဲသဏ္Coreာန်အမျိုးအစား - အစေးသဲအမာခံပစ္စည်း - သံအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: SGS, ISO 9001: 2008 အရွယ်အစား - ပုံဆွဲသည်အပိုဆောင်းအချက်အလက် - ထုပ်ပိုးခြင်း - စံတင်ပို့သည့်အထုပ်ထုတ်ကုန် - ထုတ်လုပ်မှု - ၁၀၀ တန် / လကုန်အမှတ်တံဆိပ် - မင်ဒါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ ကုန်းတွင်း၊ လေရင်းရာ - တရုတ်ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည် - ၁၀၀pcs / day လက်မှတ်: ISO9001 Port: Tianjin ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက̵် ...
အခြေခံအချက်အလက်: ရွှံ့စေးသွပ်သွန်းခြင်းနည်းလမ်း: လမ်းညွှန်ပုံဆောင်ခဲသဲသဏ္Coreာန်အမျိုးအစား - အစေးသဲအမာခံပစ္စည်း - သံအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: SGS, ISO 9001: 2008 အရွယ်အစား - ပုံဆွဲသည်အပိုဆောင်းအချက်အလက် - ထုပ်ပိုးခြင်း - စံတင်ပို့သည့်အထုပ်ထုတ်ကုန် - ထုတ်လုပ်မှု - ၁၀၀ တန် / လကုန်အမှတ်တံဆိပ် - မင်ဒါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ ကုန်းတွင်း၊ လေရင်းရင်းမြစ် - တရုတ်ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် - ၁၀၀pcs / day အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - ISO9001 ဆိပ်ကမ်း: Tianjin ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ...
A15 သွန်းသံ Access ကိုအဖုံး & Frame က
အခြေခံအချက်အလက်များအမျိုးအစား - ရွှံ့စေးခြောက်သွေ့သောသွန်းခြင်းနည်းလမ်း - Directional Crystallization Sand Core အမျိုးအစား - အစေးသဲအမာခံပစ္စည်း - သံအသိအမှတ်ပြုချက် - SGS, ISO 9001: 2008 အရွယ်အစား - ပုံဆွဲသည်အတိုင်းအပိုအချက်အလက် - ထုပ်ပိုးခြင်း - စံတင်ပို့သည့်အထုပ်ထုတ်ကုန် - ထုတ်လုပ်မှု - ၁၀၀ တန် / လကုန်အမှတ်တံဆိပ် - မင်ဒါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ ကုန်းတွင်း၊ လေရင်းရင်း - တရုတ်ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် - ၁၀၀pcs / day လက်မှတ်: ISO9001 ဆိပ်ကမ်း: Tianjin ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် Ducti ...
အခြေခံအချက်အလက်များအမျိုးအစား - ရွှံ့စေးခြောက်သွေ့သောသွန်းခြင်းနည်းလမ်း - Directional Crystallization Sand Core အမျိုးအစား - အစေးသဲအမာခံပစ္စည်း - သံအသိအမှတ်ပြုချက် - SGS, ISO 9001: 2008 အရွယ်အစား - ပုံဆွဲသည်အတိုင်းအပိုအချက်အလက် - ထုပ်ပိုးခြင်း - စံတင်ပို့သည့်အထုပ်ထုတ်ကုန် - ထုတ်လုပ်မှု - ၁၀၀ တန် / လကုန်အမှတ်တံဆိပ် - မင်ဒါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ ကုန်းတွင်း၊ လေရင်းရာ - တရုတ်ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည် - ၁၀၀pcs / day လက်မှတ်: ISO9001 Port: Tianjin ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Mingd ...